Amavithamini o Type 1 no Type 2 Diabetesics > Imithi
Amavithamini o Type 1 no Type 2 Diabetesics
Iziguli ezinesifo sikashukela zihlala zihlangabezana nokuxineka futhi ukozela. Lesi simo sichazwa yi-carbohydrate metabolism emibi. Ngaphezu kwalokho, izinqubo ze-metabolic ziba zimbi kakhulu ngenxa yokudla okuqinile nemithi eqhubekayo. Ngakho-ke, kushukela, ukuguqula ama-pancreas, kunconywa ukuthatha amavithamini A no-E, iqembu B, ne-zinc, chromium, isibabule nezinye izinto zomkhondo. Kumakhemisi, kuyathengiswa izakhiwo eziningi zama-Vitamin-mineral zabanesifo sikashukela.
Izici zohlobo 1 nohlobo 2 sikashukela
Isifo sikashukelaesohlwini lwezifo eziphakeme zokufa. Isibalo seziguli ezinalesi sifo esiyingozi sikhula ngokushesha okukhulu.
Lesi sifo sidalwa ukungasebenzi kahle kwamanyikwe. Isitho soku secretion sangaphakathi noma nje asihlanganisi i-insulin ngokuphelele, noma sikhiqize i-hormone engasebenzi.
Kunezinhlobo ezimbili ze-pathology:
Uhlobo 1 - luvela ngenxa yokungasebenzi kahle kwamanyikwe,
Uhlobo 2 - umphumela wokuzwela komzimba we-insulin.
Ushukela owengeziwe kancane kancane womisa amangqamuzana omzimba, ngakho-ke abanesifo sikashukela kufanele baphuze kakhulu. Ingxenye yoketshezi oludakayo iqoqeka emzimbeni, ibangele ukuvuvukala, enye ingxenye ikhishwe emchameni. Ngenxa yalokhu, iziguli zivame ukuya endlini yangasese. Kanye nomchamo, ingxenye ebalulekile kasawoti, izakhi zamaminerali kanye namavithamini ancibilikiswa amanzi ashiya umzimba. Ukushoda kwezakhamzimba kumele kwenziwe kabusha ngokuthatha amalungiselelo e-Vitamin-mineral.
Kungani kubalulekile ukuthi abantu abaneshukela bathathe amavithamini?
Ukuqiniseka ngokuntuleka kwe-Vitamin, umuntu onesifo sikashukela anganikela ngegazi ukuze kuhlaziywe ekhethekile elabhoratri yezokwelapha. Kodwa ukuhlaziywa okunjalo kuyabiza, ngakho akuvamile ukwenziwa.
Kungenzeka ukunquma ukuntuleka kwe-Vitamin kanye ne-mineral ngaphandle kokuhlolwa kwelebhu, kwanele ukunaka izimpawu ezithile:
ukonakala kwesimo sezinwele nokwakheka kwamapuleti ezipikili,
ukudunwa kwezicubu zomzimba.
Uma umuntu onesifo sikashukela esinezimpawu eziningana kulolo hlu olungenhla, khona-ke ukuthatha ukulungiswa kwamavithamini kuba yisibopho.
Kuyadingeka ukuthatha amavithamini wesifo sohlobo 2, ngoba:
isifo sikashukela sithinteka ikakhulukazi kubantu asebekhulile abangavamile ukuba nokushoda kwezakhi zomzimba,
Ukudla okuqinile kwesifo sikashukela akukwazi ukwanelisa umzimba ngamavithamini adingekayo,
Ukuchama kaningi, okujwayelekile kwabanesifo sikashukela, kuhambisana nokuxhunywa okunamandla kwezakhi zomzimba ezizuzayo ezivela emzimbeni,
ukugcwala okukhulu koshukela egazini kusebenze izinqubo ze-oxidative lapho kwakhiwa khona ama-radicals wamahhala abulala amaseli adala izifo ezingathi sína, futhi amavithamini abandakanyeka ekubhujisweni kwama-radicals wamahhala.
Uma kwenzeka isifo sohlobo 1, ukuthatha amavithamini kulungiselelwa kuphela ngokudla okungenampilo noma ubunzima ngokulawula amazinga kashukela egazini.
Amavithamini Abalulekile Kwesifo Sikashukela
Namuhla, emashalofini ekhemisi ungathola izinhlobo eziningi zamavithamini namaminerali aklanyelwe iziguli ezinesifo sikashukela ikakhulukazi. Udokotela unikeza umuthi ofanelekile kakhulu esigulini, egxile ebukhali balesi sifo, ubukhulu bezimpawu, ukuba khona kwe-pathologies ehambisanayo.
Ezigulini zohlobo 1, kunconywa amavithamini alandelayo:
Izinto zeqembu B. Pyridoxine zibaluleke kakhulu (B6) ne-thiamine (B1) Lawa mavithamini enza isimo sohlelo lwezinzwa senziwe buthakathaka, uqobo ngesifo uqobo nangomuthi.
Ascorbic acid (C). Isifo sikashukela sithinta kabi isimo semithambo yegazi. Vitamin C iqinisa futhi ithambise izindonga ze-vascular.
I-Biotin (H). Ixhasa ukusebenza okujwayelekile kwazo zonke izitho nezinhlelo ngokuntuleka kwe-insulin. Yehlisa ukungena kwe-insulin izicubu.
I-retinol (A). Kuvimbela ubunzima obukhulu besifo sikashukela obuholela ekuphuphuthekeni - i-retinopathy, lapho kuthinteka khona ama-capillaries esweni lamehlo.
Iziguli zohlobo 2 zidinga ukuthatha izinto ezilandelayo:
I-Chrome. Izinhlobo zesifo sikashukela esingu-2 ziyimilutha kumaswidi nemikhiqizo kafulawa. Umphumela ukukhuluphala. I-Chromium yinto etholakalayo esiza ekulweni nesisindo.
UTocopherol (E). Ibuyisela umfutho wegazi, iqinisa izindonga zemisipha nemicu yemisipha.
URiboflavin (B2) Ilungu lokuphendula okuningi kwe-metabolic. Kuyadingeka ukuthi i-normalization of metabolism.
I-Nicotinic acid (B3) Ihlanganyela ekuphendukeni kwe-oxidative okuthinta ukuzwela kwezicubu ukungena kwe-insulin.
I-Alpha Lipoic Acid (N). Icindezela izimpawu zesifo se-polyneuropathy esihambisana noshukela.
Izinkimbinkimbi zamavithamini namaminerali sikashukela
Okulandelayo izakhiwo eziphezulu ze-Vitamin nezimbiwa ezilungele abaneshukela. Amagama, izincazelo kanye namanani wezidakamizwa anikezwa.
I-Doppelherz asset Vitamin yeziguli ezinesifo sikashukela. Umuthi othengwe kakhulu owenziwe yinkampani yezokwelapha yaseJalimane iQueisser Pharma. Le yinkimbinkimbi, esetshenziswa ngendlela yethebhulethi, isuselwa amavithamini ayi-10 nezakhi ezi-4 zamaminerali eziqinisa amasosha omzimba, yenza isimo sasemuva sohlelo lwezinzwa nemithambo yegazi kushukela. Ukuqoqwa kwezakhamzimba ezibhebheni kuphakeme kunesibonelelo sansuku zonke sabantu abaphilile, kepha kufanelekile kwabanesifo sikashukela. Iphilisi ngalinye liqukethe amavithamini C no-B6 kumthamo ophindwe kabili nsuku zonke, u-E, B7 kanye B12 ngethamo eliphindwe kathathu, amaminerali (chromium ne-magnesium) aphakeme kakhulu ekuxakweni kunakumalungiselelo afanayo avela kwabanye abakhiqizi. Kunconywa izithasiselo zabanesifo sikashukela abagxile kumaswidi, kanye nesikhumba esomile nesikhanyayo njalo. Iphakethe elilodwa, kufaka namathebhulethi angama-30, kubiza cishe ama-ruble angama-300.
Amavithamini eziguli ezinesifo sikashukela esivela eVervag Pharm. Okunye ukulungiselela ithebhulethi yaseJalimane nge-chromium, i-zinc namavithamini ayi-11. Vitamin A ikhona ngesimo esingenangozi, kuyilapho u-E no-B6 bakhathazekile kakhulu. Amaminerali afakiwe kumthamo wansuku zonke. Intengo yephakeji efaka namathebhulethi angama-30 icishe ibe ngama-ruble angama-200, kufaka namathebhulethi angama-90 - aze afike kuma-ruble angama-500.
Isifo Sikashukela Alphabet. Ingxube yamavithamini evela kumenzi waseRussia, obonakala ngokuqamba okunothile kwezakhi eziwusizo. Amacwecwe aqukethe izinto ezibalulekile zomzimba kumithamo emincane, futhi zidingeka kakhulu isifo sikashukela ekujuleni okuphezulu. Ngaphezu kwamavithamini, ukulungiswa kuqukethe i-blueberry ekhishwe, ewusizo emehlweni, kanye nezicashunwa ze-burdock ne-dandelion, ezithuthukisa ukuthathwa koshukela. Amacwecwe ahlukaniswe ngemithamo emi-3 ngezikhathi ezahlukahlukene zosuku. Ithebhulethi yokuqala ithathwa ekuseni ukuveza umzimba emzimbeni, okwesibili - ntambama ukuvimbela izinqubo ze-oxidation, okwesithathu - kusihlwa ukunciphisa umlutha kumaswidi. Iphakheji efaka namathebhulethi angama-60 ibiza cishe ama-ruble angama-300.
Kuzoqondisa. Leli gama linenkimbinkimbi yamavithamini eyenziwe yinkampani yaseRussia i-Evalar. Ukwakheka kuncane: amavithamini ayi-8, i-zinc ne-chromium, okukhishwa kwi-burdock ne-dandelion, kanye nokukhishwa kwamaflash amaqabunga ebhontshisi, okusiza ukugcina ukuhlushwa ushukela kwegazi okujwayelekile. Azikho izengezo ezingadingekile ekwakhiweni, kuphela izingxenye ezibalulekile kwabanesifo sikashukela ezikhona ngokwesimo semihla ngemihla. Amavithamini angabhajethi, ukufakwa ngamathebhulethi angama-60 kubiza okungaphezu kwama-ruble angama-200.
Oligim. Omunye umuthi ovela ku-Evalar. Kungcono ukwakheka kune-Direct. Amacwecwe afaka amavithamini ayi-11, amaminerali ayi-8, i-taurine, i-retinopathy yokuvimbela, i-Indian Gimnema leaf leaf, ekhipha ushukela wegazi ne-cholesterol. Usuku lukhombisa ukusetshenziswa kwamacwecwe ama-2: elinye linamavithamini futhi likhipha, elesibili linamaminerali. I-Tocopherol, amavithamini e-B kanye ne-chromium kusenkingeni enkulu. Iphakheji efaka amaphilisi angama-30 e-vithamini kanye namaminerali angama-30 abiza cishe ama-ruble angama-300.
I-Doppelherz Ophthalmo-DiabetoVit. Umuthi owenzelwe ngokukhethekile impilo yezitho zombono kushukela. Kuqukethe i-lutein ne-zeaxanthin - izinto ezidingekayo ukuze kugcinwe ukubonwa okubonakalayo. I-tata akufanele ithathwe isikhathi esingaphansi kwezinyanga ezi-2, ngoba uma inkambo idlulisiwe, kungenzeka ukuthi ukusetshenziswa kwe-retinol okweqile kungalimaza umzimba ngokweqile. Ngephakheji efaka namathebhulethi angama-30, kuzodingeka ukhokhe ama-ruble angama-400.
Amavithamini wezingane ezinesifo sikashukela
Akukho amalungiselelo akhethekile evithamini ezingane ezinesifo sikashukela. Futhi ukusetshenziswa kwezinto eziqukethwe kwizakhiwo ezijwayelekile zezingane akwanele umzimba wengane egulayo. Odokotela bezingane bavame ukunquma amavithamini wesifo sikashukela kubantu abadala kuya ezigulini ezincane, kepha bakhulisa umthamo kanye nenkambo yokuphatha ngokuya ngesisindo sengane. Abazali akudingeki bakhathazeke: ngokusetshenziswa okufanele, amavithamini amadala aphephile ngokuphelele kwisifo sikashukela esincane. Udokotela wakho angahle akunikeze iodomarin, isengezo sokudla esisekelwe kumaminerali, kwengane egulayo.
Ngokwehlukana, kufanele kushiwo nge-vithamini D. Ukuntuleka kwalesi sidakamizwa emzimbeni wengane kuvusa ukukhula kwesifo sohlobo 1. Futhi kubantu abadala, ukuntuleka kwe-calciferol kungukukhwabanisa kokuphazamiseka kwe-metabolic, umfutho wegazi ophakeme kanye nokukhuluphala - izimpawu zokuqala zesifo sohlobo 2. Ngakho-ke, abantu abadala nezingane ngeke banganakwa esimweni sokuntenga, kubalulekile ukugcwalisa ukuntuleka kwezinto ngamalungiselelo wemithi.